❤️ Sida Looga Fogeeyo Taageerayaasha Instagram-ka ee Aan Ku Raacsanayn ? - Winches Club
Instgram-ka waxa ku dhex milmay su'aalo ururineed oo u dhexeeya kuwa ugu badan. Sida loo tirtiro taageerayaasha Instagram-ka ee aan dib kuu raacin? Ma fiicna in aad aragto qof ka baxay, sababtoo ah waxay yaraynaysaa is-diiwaangelintaada / saamigaaga raacayaasha.
Maxaa ka sii badan, Inta badan isticmaalayaasha Instagram waxay u badan tahay inay raadinayaan inay ka jawaabaan su'aasha aasaasiga ah ee noocan oo kale ah maadaama ay ku cusub yihiin goobta ama ay baranayaan gudaha iyo dibadda.
Ka sokow, mararka qaar, Baraha Instagram-ka waa la cusboonaysiiyay oo si lama filaan ah nooma raacin, xataa haddii aan ku qanacnay ama aan rajaynayno inay dhici doonaan.
Sida Looga Fogeeyo Taageereyaasha Instagram-ka Aan Ku Raacaynin?
Ku saabsan la socoshada la'aanta Instagram, Waa wax aan la dafiri karin oo caan ah oo fudud, waa ciyaarta ubadku inay sameeyaan, oo halkan waxaa ah farsamooyinka loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha sida looga takhaluso kuwa raacsan instagram-ka ee aan ku raacin:
Instagram News Automation. Isticmaal Codsiyada Dhinac Saddexaad
Isticmaalka app-ka dhinac saddexaad waa habka ugu waxtarka badan ee lagu ogaan karo dadka aan ku raacin beryahan dambe oo aan dib kuu raacin..
Ka sokow, Qaar badan oo ka mid ah apps-ka saddexaad ayaa laga heli karaa Google Play Store iyo dukaamada app-ka waxaana guud ahaan loo arkaa ammaan in la isticmaalo.
1.1. Yaa Kaaga Dabacay Instagram-ka
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda, Software-kani waxa uu ballan qaadayaa in uu noqon doono kan ugu kalsoonida badan uguna dhaqsaha badan ee xallinta falanqaynta isticmaaleyaasha abka Instagram.
Maxaa ka sii badan, waxa ay ku ogolanaysaa in aad lasocoto inta isticmaale ee raacsan ee kasbaday iyo luntay, yaa ku raacay oo aan dib kuu raacin.
Software-ku waxa uu helay in ka badan 4,600 dib u eegis oo ku saabsan App Store, taas oo keeneysa 4 dhibcood,5 xiddigood.
1.2. Maamulka raacayaasha ee Instagram
Waxaad xakameysaa tirooyinka Instagram raacayaasha kuwaas oo labaduba ah mid degdeg ah oo sax ah. Waxaad arki kartaa cidda iska saartay, yaa dib kuu raacin wali, iyo kuwo kale
Maxaa ka sii badan, oo leh in ka badan 79,000 dib u eegis, Codsigan waxa uu helay qiimayn dhan 4,3 xidigood.
1.3. Followers et Unfollowers
U falanqee xisaabaadka Instagram ee akoonkaaga.
Shaqadeeda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah raadinta Instagram-ka kuwa aan raacsanayn iyo kuwa aan raacsanayn..
Ka sokow, waxay heshay in ka badan 130,000 dib u eegis Google Play waxayna kasbatay qiimaynta 4-xiddig.
Isticmaalka Codsiyada Dhinac saddexaad
Way fududahay in la isticmaalo codsiyada.
Tag tab “dib ha ii soo raacin/ dib ha ii raacin” inaad dadka aan ku raacin aad ka raacdo.
Haddii aad iska saarto qof isticmaalaya apps-kan, waxaa lagaa mamnuuci doonaa isticmaalkooda mustaqbalka!
Maxaa ka sii badan, Codsiyadani waxay si weyn u fududeeyaan hawsha isticmaalaha. Botka waxaa lagu aqoonsan doonaa sidan oo kale algorithm-ka Instagram.
Halkii ay ahayd, ee ka bixida, fur Instagram app oo raadi isticmaalkooda.
Ka sokow, dadka ha raacin 5tii ilaa 10kii daqiiqoba mar si aad uga fogaato xannibidda saamiyada.
Instagram News Automation. Soo hel oo gacanta ka-tag raac-raacayaasha.
Qaabka dheer ee shaqsiyaadka Instagram-ka looga daayo ee aan ka jawaabin kuwa raacsan waa in si firfircoon loo raadiyo..
Saddex tallaabo, waa kan sida ay u shaqeyso.
● Ka raadi magac isticmaale liiska dadka ku raacay.
● Haddii profile ka soo baxo natiijooyinka raadinta, wuu ku raacayaa. Looma baahna in la raaco.
● Haddii aad raadiso magacaaga isticmaale oo uusan muuqan, kuma daba galo. Hadday sidaas tahay, daawasho la'aan.
Tani waa hab dheer oo lagu helo kuwa raacsan..
Taa bedelkeeda, isticmaal qalab dhinac saddexaad si aad ula socoto kuwa ” Is-diiwaangelinta “.
Ka sokow, aad bay u fududahay in la helo oo laga saaro dadka.
Waxaa jira habab ku saabsan sida looga baxo raacitaanka Instagram-ka ee aan dib kuu raacin.
Isticmaalka a software-ka saddexaad si loo helo xisaabaadka aan la socon waxay kaa caawin kartaa inaad si fudud u heshid oo aad ka bixisid isla wakhti isku mid ah.
Ka sokow, ma la socon kartid oo keliya dadka aan dib kuu raacin, laakiin sidoo kale waxyaabo kale, kuwa raacsan iyo kuwa aan raacsanayn ee isticmaalaya software qolo saddexaad.
Maqaal horeInstagram News Automation
Maqaalka XigaWaqtiga ugu Wanaagsan ee lagu dhejiyo Instagram-ka sanadka 2022 : xaashida khiyaamada maalinta